Halkee ayaan ka isticmaali kartaa xarun USB nolosha? | | BLOG OS-DUKAANKA
xarun USB waa qalab yar oo u fidiya interface USB ah oo wuxuu galay dhowr xarun USB interfaces. waxaa xarun USB powered degdeg ah ku amraya dekedda adabtarada awood xarun xogta la USB for macbook.
xarun xarun USB waxaa loo isticmaali karaa qalabka USB sida disk adag mobile, USB flash, akhristaha kaarka, telefoonka gacanta, camera digital, camera xalinta sare, camera video digital iyo audio multi-channel. Waxa ay taageertaa la xidhiidha isku mar ah qalabka-xawaaraha sare ee USB kala duwan. , gudbinta deggan.
Hub USB waa qumman yahay safarka ganacsiga iyo maalin xirmaan use.Can si uu u daawado filimada on TV ama wadaagaan xukun dekedda ah ee aad saaxiibada iyo qoyska iyo uma baahna inay rakibi wadayaasha furaysto iyo ciyaaro ay fududahay in la ballaariyo.
Hub USB waa Taxadarka Waayo Isticmaal >>>
Hub USB noo qaatay sahlanaato,kordhinta dabacsanaanta computer,laakiin miyaad taqaan sida saxda ah loo isticmaalo?
First of dhan,marka aan ka heli Hub USB aan si degdeg ah oo aan ku xidhi kartaa wax badan oo qalabka ,such as Mouse ,phone,printer, charger, waxay keentay doonaa mid aad u kulul oo u dhow Jack sababtoo ah amraya baahida phone u baahan yahay hadda a weyn,marka ay wada shaqaynaya in ka badan hal qalab hours.Some ma shaqeyn doono.
Sidaa darteed, waa in aan ku bixino isticmaalka noqnoqda ee xarunta dareenka, dhawrtaan isbedel heerkulka. Haddii ay jirto cillad ah, gooyay xiriir.
xarun USB A runtii waa wax ka badan kabo casri ah oo la dekedaha USB dheeraad ah waxa on. Waxaad furaysto xarun galay dekedda USB aad laptop ee. Markaas waxaad ku shuban kartaa meel labo ilaa afar ilaa sideed qalabka USB galay xarun ah.
Ma muuqan kara wax ku ool ah, laakiin aad laptop yeelan karaan ilaa 127 Qalabka USB ku lifaaqan, waxa uu mar kasta la siiyaa. Haa, oo dhan hal mar. Taasi waa mid ka mid ah furaha expandability dekedda USB ee.
qalabka qaar ka mid ah aan la ordi karaan ka xarumaha, sida-xawaaraha sare drives adag gaar ah. Haddii ay sidaa tahay, qalabka waa in si toos ah oo shidan galay dekedda USB computer ee. Ha isku dhibin: fariin digniin A kor yimaado oo idinku waanin waxa la sameeyo marka waxaas oo kale dhacdo.
Waxaa jira laba nooc oo ah xarumaha: powered iyo unpowered. xarun The ku shaqeeya waa in lagu rakibaa in ama ka computer ka soo dheegato ay awood. xarumaha Powered waa lagama maarmaan si ay u keento awood dheeraad ah si qalabka USB qaar ka mid ah.
Waayo, dalabyo gaar ah oo dheeraad ah, fadlan halkaan sii joogo.
WIFI Wireless Technology combine with life, ganacsiga, studies
HTC Technology processor Processor Telefoonka gacanta taageero darawalka Taageerada Driver Taxanaha Model Device Ujeeddo Dadweynaha Technology_Internet fasiraad sharci ah 64-Windows yara OS-DUKAANKA Software Tababaraha qalab Graphics HD Intel Nokia processor Samsung
64-Windows yara Intel Ujeeddo Dadweynaha Qualcomm processor Server Intel Samsung Tababaraha qalab Software OS-DUKAANKA Model Device fasiraad sharci ah HTC Graphics HD taageero darawalka Processor Technology Sony Ericsson Telefoonka gacanta Technology_Internet processor Samsung Galaxy casriga ah Nokia Taageerada Driver Taxanaha